Dowladda Kenya oo Turkiga kasoo iibsanaysa gaadiid gaashaaman.
Drone Mareykanku leeyahay oo ku dhacday dalka Niger.
Weeraro lagu miray saldhigyada ciidamada shisheeye iyo sarkaal lagu dilay galbeedka Muqdisho.
Nin gabar ku kufsaday degmada Ceelbuur oo 100 Garbaash lagu xukumay.
0 Wednesday January 27, 2021 - 07:21:51
Hubanti la'aan ayaa ka taagan xaaladda dhabta ah ee uu ku suganyahay Abiy Axmed oo ah R/wasaaraha Xabashida Itoobiya.
0 Tuesday January 26, 2021 - 17:05:46
Dowladda Kenya oo si adag loogu miciya siibay dagaalka jihaadka ah ee ka socda dalka Soomaaliya ayaa markale sheegtay in ay lacago Todobaatameeyo malyan oo dollar ah kusoo iibsanayso hub iyo gaadiid gaashaaman si ay isaga caabiso shabaabul Mujaahidiin.
0 Tuesday January 26, 2021 - 14:38:04
Wararka ka imaanaya wadanka Niger ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegaya in diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay ay kusoo dhacday mid kamida gobollada wadankaasi.
0 Tuesday January 26, 2021 - 12:43:02
Xoogag jihaadi ah ayaa markale weeraro safballaaran ah ku qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanno katirsan gobollada dalka Soomaaliya.
0 Tuesday January 26, 2021 - 12:37:13
Fagaare kuyaal degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud waxaa ka dhacay xukun xad ah oo kamid ah xuduudda Shareecada Islaamka.
0 Monday January 25, 2021 - 17:22:49
Xafiiska warfaafinta Xarakada Al Shabaab ayaa faafiyay sawirro banaanka soo dhigaya khasaarihii aadka uxooganaa ciidamada dowladda kasoo gaaray dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug.
Saraakiil siyaaba kala duwan loogu dilay Muqdisho iyo Boosaaso.
0 Monday January 25, 2021 - 14:53:03
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax miino lagu dilay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada miina baarista maamulka isku magacaabay 'Puntland'.
11 qof Shacab ah oo ku dhintay dagaalkii Beled Xaawo.
0 Monday January 25, 2021 - 13:19:51
Khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay dagaalladii cuslaa ee maanta ka dhacay deegaan katirsan gobolka Gedo ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
Dhimashada dagaalkii Bacaadweyn oo 21 gaartay.
0 Monday January 25, 2021 - 11:49:13
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo shalay gobolka Mudug ku dhaxmaray ciidamada maamulka isku magacaabay 'Galmudug' iyo dagaalyahannada Al Shabaab.
Qarax ay askar ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Weydoow.
0 Monday January 25, 2021 - 11:45:22
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qarax xooggan oo ciidamo katirsan dowladda Federaalka lagula beegsaday deegaan dhanka galbeed uga beegan Muqdisho.
Mas'uul katirsanaa maamulka Axmed Madoobe oo Kismaayo lagu dilay.
0 Monday January 25, 2021 - 06:53:58
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya toogasho xalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose.
Maleeshiyaad Daacad u ah C/Rashiid Janan oo gudaha ugalay Beled Xaawo.
0 Monday January 25, 2021 - 06:48:17
Dagaallo culus ayaa deegaan katirsan gobolka Gedo ku dhaxmaray maleeshiyaad kala taabacsan dowladda Farmaajo iyo maamulka Axmed Madoobe.
0 Sunday January 24, 2021 - 20:02:56
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay dagaallo culus oo dib uga qarxay deegaan katirsan gobolka Mudug ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Sunday January 24, 2021 - 09:12:26
Wararka ka imaanaya bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in markale weeraro culus lagu qaaday qaar kamid ah sadlhigayada ciidamada shisheeyaha AMISOM.
0 Sunday January 24, 2021 - 09:02:16
Cudurka dilaaga ah ee Carona Virus ayaa kumanaan kun oo ruux saacadihii lasoo dhaafay ku dilay qaar kamid ah wadamada qaaradda America oo ah kuwa ugu daran ee uu cudurkani halaagga ka geysanayo.
0 Sunday January 24, 2021 - 08:38:20
Kooxo burcad badeed ah oo ku sugan galbeedka qaaradda afrika ayaa gacanta ku dhigay markab shixnado ganacsi ah sida oo laga leeyahay dalka Turkiga.
0 Saturday January 23, 2021 - 18:42:20
Xoogag hubaysan ayaa maanta dilal qorshaysan ka geystay dhowr xaafadood oo katirsan magaalada Muqdisho.
0 Saturday January 23, 2021 - 17:00:39
Melleteriga Itoobiya ayaa lagu eedeeyay in uu xasuuq daran ka geysanayo gobolka Waqooyiga dhaca ee Tigray halkaas oo lagasoo calaamadeeyay gabood fallo dhan walba ah.
Xildhibaan hore oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay Bariga Muqdisho.
0 Saturday January 23, 2021 - 13:36:41
Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax culus oo maanta barqadii ka dhacay mid kamida degmooyinka gobolka Banaadir.
0 Saturday January 23, 2021 - 10:58:16
Cudurka Carona Virus ayaa markale halaag daran ka geystay qaar katirsan gobollada dalka Mareykanka xilli maamulka cusub ee wadankaas uu sheegayo in uu wax ka qaban doono faafitaanka caabuqa.
0 Saturday January 23, 2021 - 10:29:25
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax xooggan oo xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Saturday January 23, 2021 - 07:33:15
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo culus ay ka dhaceen mid kamida degmooyinka gobolkaas oo muddo sanada ah ay gacanta ku hayeen ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dowladda.
0 Thursday January 21, 2021 - 18:01:55
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro ciidamo huwan ah lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Bakool ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
0 Thursday January 21, 2021 - 10:58:57
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in weerar khasaare dhaliyay lagu qaaday maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka ee shisheeyaha la shaqeeya.
0 Thursday January 21, 2021 - 10:21:51
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay weerar hor leh oo ciidamada shisheeyaha Itoobiya lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Gedo ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
0 Thursday January 21, 2021 - 10:18:04
Dowladda Mareykanka ayaa yeelatay madaxweynihii 46aad tan iyo markii uu dalkaas xuriyaddiisa ka qaatay gummeystihii Ingiriiska.
Guddoomiyihii degmada Hodon oo si mugdi kujiro Muqdisho loogu dilay.
0 Thursday January 21, 2021 - 10:08:17
Toogasho xalay ka dhacday degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa sababtay dhimashada mid kamida mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ugu magacaaban dowladda Farmaajo.
0 Wednesday January 20, 2021 - 19:31:21
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in weerar hor leh oo khasaare dhaliyay lagu beegsaday mas'uuliyiin iyo ciidamo katirsan dowladda Federaalka.
0 Wednesday January 20, 2021 - 15:52:15
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa looga hadlay duqeymaha indha la'aanta ah ee diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka geysanayaan dalka Soomaaliya.
0 Wednesday January 20, 2021 - 15:37:45
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax culus oo markale gudaha magaalada Muqdisho lagula eegtay mas'uul katirsan maamulka gobolka Banaadir ugu magacaaban DF-ka.
0 Wednesday January 20, 2021 - 15:05:11
Xili shalay duleedka degmada Jamaame Lagu dilay Suldaan Maxamed Cabaas Axmed Diirshe oo ahaa suldaankii Beesha habar gidir ee goballada jubbooyinka ayaa dilkaasi gardarrada ah ee uu gaystay Maraykanka waxaa ka hadlay ehellada Suldaanka iyo nabad doonada ku nool degmada jamaame ee jubbada hoose.
0 Wednesday January 20, 2021 - 15:01:57
Caabuqa Covid19 ayaa saacadihii lasoo dhaafay kumanaan kun oo ruux ku dilay inta badan gobollada dalka Mareykanka oo ah dalka koowaad ee caalami ahaan la dhiban caabuqan safmareenka ah.
0 Tuesday January 19, 2021 - 13:28:41
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in duqeyn diyaaradeed oo ka dhacay duleedka Jamaame ay dishay mid kamida Odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed.
0 Tuesday January 19, 2021 - 12:15:48
Mas'uuliyiin katirsanaa dowladda Federaalka ayaa ku dhintay qarax ka dhacay mid kamida isgoysyada lagasoo galo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
0 Tuesday January 19, 2021 - 11:16:31
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada shisheeyaha AMISOM ay isaga baxeen deegaan istiraatiiji ah oo ku dhow degmada Qoryooleey.
« Prev1234567 ... 383Next »